Mogadishu Journal » Yariisoow oo xalay kormeeray fariisimaha ciidamada DF ee Muqdisho
Mjournal :-Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Eng. C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow) oo uu wehliyo Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliya ayaa xalay saq dhexe koormeer ku tagay Xarumaha Ciidamada Booliiska Soomaaliya ee ay ku leeyihin degmooyinka gobolka.
Sidoo kale waxa ay koormeereen Koontoroolada ciidamada Booliiska ay ku leeyihiin isgoysyada Muqdisho kuwaasi oo dadka iyo gaadiidka lagu baaro.
Labada masuul ayaa waxaa koormeerkooda ku wehlinaayay Guddoomiye ku xigeenada gobolka iyo qaar ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Booliiska.
Isgoysyada ay koormeer ayaa waxaa ka mid ah Isgoyska KM4, isgoyska Soobe, isgoyska Dan-wadaagta iyo Ex-control Afgooye.
Sidoo kale saldhigyada ay koormeereen waxaa ka mid ah saldhig Galbeed ee degmada Dharkeynley iyo saldhiga degmada Hodan.
Taliyaha ciidanka Booliiska Soomaaliya Generall Bashiir Cabdi Maxamed ayaa sheegay in ciidamada Booliiska ay mar walbo heegan ku jiraan.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Eng. C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow) ayaa saraakiisha iyo Ciidanka Booliiska ku amaanay sida ay habeen iyo maalin diyaarka ugu yihiin sugidda amniga caasimada.
Dhanka kale Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Eng. C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow) iyo Taliyaha Ciidanka Booliiska soomaaliya General Bashiir Cabdi Maxamed ayaa si wadajir ah shacabka Muqdisho ugu baaqay iney ciidamada ammaanka la shaqeeyaan.